Ny varotra teknolojia tsara indrindra amin'ny 11.11 amin'ny AliExpress | Androidsis
Any Shina dia tsy misy zoma mainty, fa misy ny andron'ny mpitovo. Amin'ny 11 Novambra, ankalazana ny Andron'ny mpitovo, andro iray izay mitovy amin'ny Zoma Mainty any Shina, izay tsy ankalazana ity farany. Mandritra ny fankalazana ny Andro Singles dia afaka mahita fitaovana elektronika marobe miaraka amin'ny fihenam-bidy lehibe isika.
Raha mieritreritra ny hanavao ny finday avo lenta taloha ianao, mividy fehin-tànana miakatra na miditra amin'ny tontolon'ny smartwatches dia manasa anao aho hijery ireo tolotra rehetra asehonay anao eto ambany, Fifanarahana mety tsy ho hitantsika amin'ny zoma mainty manaraka.
Ny tolotra rehetra asehonay anao eto ambany dia avy amin'ny AliExpress, ny Amazon Amazon izay tato ho ato dia nanjary loharanom-pahalalana lehibe ho an'izao tontolo izao, tsy i Espana ihany sy izay ahafahantsika mampiasa finday avo lenta, fehin-tànana, fakan-tsarimihetsika, bateria azo averina ary mizana aza.
1 Xiaomi Mi Band 4 amin'ny vidin'ny 23,99 euro
2 Xiaomi Redmi Note 8 Pro amin'ny 227 euro
3 Router Xiaomi amin'ny vidin'ny 13,71 euro
4 Xiaomi Mi 9T amin'ny vidin'ny 324 euro
5 Amazfit GTS amin'ny vidin'ny 138 euro
6 Amazfit Bip Lite amin'ny vidiny 50,65 euro
7 Headphone Xiaomi AirDots amin'ny vidiny 16,99 euro
8 Ny boaty S ho an'ny 85,48 euro
9 Xiaomi Power Bank 20.o00 mAh amin'ny 20,99 euro
10 Scale My Body Composition 2 ho an'ny 21,41 euro
Xiaomi Mi Band 4 amin'ny vidin'ny 23,99 euro
Kely na tsy misy tokony horesahina momba ny iray amin'ireo fehin-tanana mivarotra indrindra eto an-tany, fehin-tànana nahatratra ny taranaka fahefatra miaraka amin'ny zava-baovao ampidiro efijery loko. Ity bracelet ity dia ahafahantsika manisa ny hetsika ara-panatanjahantena ary koa manara-maso ny torimaso. Ireo fampahalalana rehetra ireo dia azo alaina amin'ny alàlan'ny fampiharana Mi Fit, fampiharana izay azontsika sintonina maimaimpoana amin'ny alàlan'ny Google Play Store.
Vidio Xiaomi Mi Band 4
Xiaomi Redmi Note 8 Pro amin'ny 227 euro
Ny Xiaomi Redmi Note 8 Pro dia manolotra a Efijery 6,53-inch miaraka amina toerana misy rano mitete. Ny efijery dia mahatratra ny vahaolana 2340 × 1080 FullHD + ary famirapiratanana 500 nits. Ao anatin'ity terminal ity dia nisafidy ny mpikirakira MediaTek Helip G90T i Xiaomi, processeur 8-core miaraka amin'ny sary Mali G76, 6 GB RAM ary 64 GB fitehirizana UFS 2.1.
Vidio Xiaomi Redmi Note 8
Router Xiaomi amin'ny vidin'ny 13,71 euro
Raha manana ianao olana amin'ny fifandraisana Wi-Fi ao an-tranonao na any amin'ny orinasanao, ny zavatra tsara indrindra azonao atao dia ny manampy router Wi-Fi amin'ny modem anananao ao an-trano, modem izay matetika manome fandrakofana tena mahantra. Ny router Xiaomi dia manome antsika hatramin'ny 300 Mbps noho ireo antena roa ivelany izay manitatra ny fandrakofana ny famantarana Wi-Fi ao an-tranonay.
Mamela ny fifandraisana miaraka amin'ireo fitaovana 64, koa azontsika atao ny mampiasa azy io amin'ny orinasantsika, indrindra raha bara, trano fisakafoanana na fisakafoanana izy io, izay ahafahan'ny isan'ny fifandraisana miaraka lasa olana amin'ny router na modem ananantsika.
Vidio ny Xiaomi Router
Xiaomi Mi 9T amin'ny vidin'ny 324 euro
Iray amin'ireo finday avo lenta faran'izay feno izay hitantsika eny an-tsena amin'izao fotoana izao, atolotra antsika indray i Xiaomi miaraka amin'ny Mi 9T, finday avo lenta mampiditra Efijery 6,39-inch miaraka amin'ny efijery AMOLED, vahaolana feno HD + ary mampiditra ny mpamaky ny rantsan-tànana eo ambaniny Amin'io. Ny atitany dia tantanan'ny Snapdragon 730 novokarin'i Qualcomm ary niaraka tamina RAM 6 GB sy fitehirizana 128 GB.
Any aoriana dia hitantsika ny iray amin'ireo manintona azy indrindra: ny fakantsary. Ny Xiaomi Mi 9T dia manolotra fakan-tsary miisa 3 ho antsika, ny mpiorina 48 mpx novokarin'i Samsung. Ny fakan-tsary voalohany dia tsy amin'ny endrika notch na rano indray mitete, fa eo amin'ny sisin'ny ambony amin'ny efijery ary miseho ary manjavona amin'ny alàlan'ny pop-up. Mahatratra 20 mpx ity fakantsary ity.
Vidio Xiaomi Mi 9T
Amazfit GTS amin'ny vidin'ny 138 euro
Ao ambadiky ny Huami Amazfit GTS dia Xiaomi, na dia tsy mivantana aza, satria ity orinasa ity dia iray amin'ireo an'arivony ananan'i Xiaomi ao anatin'ny tontolo iainany. Manolotra antsika ny Amazfit GTS a famolavolana tena mitovy amin'ny Apple Watch, na amin'ny hatsarana na amin'ny haavon'ny rindrambaiko. Izy io dia misy amin'ny loko isan-karazany na anaty boaty na amin'ny tadiny.
Ny fizakantena, hoy ny mpamokatra, mahatratra 14 androIzy io dia mahatohitra rano 5 ATM ary manana maody fanatanjahan-tena 12 hamaritana ny hetsika fanatanjahantena ataontsika. Raha mitady famantaranandro tsara sy tsara ary mora ianao dia ny Amazfit GTS no angamba ny smartwatch mifanentana indrindra amin'ny paosinao.
Vidio Amazfit GTS
Amazfit Bip Lite amin'ny vidiny 50,65 euro
fa raha tsy te handany vola be ianao amin'ny famantaranandro, Huani koa dia manome maodely mora vidy kokoa ho antsika: Amazfit Bit Lite, maodely izay afaka hitantsika mihoatra ny 50 euro ary manome anao bateria 45 andro ankoatran'ny mahazaka rano hatramin'ny 3 ATM. Tahaka ny maodelin'ny GTS, ny Bit Lite dia mamela antsika hanara-maso ny hetsika ara-batana ataontsika amin'ny fotoana rehetra ary izy no miandraikitra ny fanaraha-maso ny fitepon'ny fony 24 ora isan'andro.
Vidio Amazfit Bip Lite
Headphone Xiaomi AirDots amin'ny vidiny 16,99 euro
Raha mitady telefaona finday tsy misy vidiny sy mora ianao, indray dia mila mitodika any Xiaomi isika. Miaraka amin'ny AirDots, manana an-telefaona tsy misy fampiasa miaraka amin'ny fiarovana IPX 4 mifanaraka amin'ny iOS sy Android isika, miaraka amin'ny fifandraisana Bluetooth 5.0 sy ny fizakan-tena hatramin'ny 4 ora, izay azontsika atao mandritry ny 12 ora amin'ny fampiasana ny cas d'exploitation.
Tsy toy ny modely hafa eny an-tsena, ny AirDots dia malina ary tsy mahasarika olona manokana. Ankoatr'izay, avy amin'ny headphones dia afaka miantso ny Google Assistant sy Siri isika, koa raha ny fiasa dia mihoatra ny ampy.
Vidio Xiaomi AirDots
Ny boaty S ho an'ny 85,48 euro
Raha ny rafitra fiasan'ny televizionanao no ratsy indrindra indrindra eny an-tsena amin'izao fotoana izao na tsy manana fahitalavitra marani-tsaina ianao, Xiaomi dia manome antsika ny Mi Box S, boaty ambony hamelana avadiho ho marani-tsaina ny fahitalavitra taloha raha te hiditra amin'ireo serivisy horonantsary samihafa misy eny an-tsena, na Netflix, HBO, Amazon Prime, Hulu ...
Ao anatin'ny Mi Box S no ahitantsika ny Android 8.1. Misaotra ny processeur 4-core sy ny RAM 2 GB azonay atao milalao horonantsary amin'ny kalitao 4k tsy misy ruffling na mijaly amin'ny andrana. Izy io dia misy fifandraisana HDMI faha-2 sy seranana USB faha-2 hampifandray ireo kapila mafy sy ny kitay USB.
Vidio ny Xiaomi Mi Box S
Xiaomi Power Bank 20.o00 mAh amin'ny 20,99 euro
Raha tsy mamela anao hamita tsara ny andro ny baterian'ny findainao, na matetika ianao dia mivoaka amin'ny faran'ny herinandro sy maniry manadino momba ny chargerSafidy iray tokony hodinihina ny batterie azo averina. Ny Xiaomi Power Bank dia manome antsika 20.000 mAh fahaiza-manao izay ahafahantsika maka vola amin'ny iPhone sy ny takelaka na ny fakan-tsary amin'ny fotoana samihafa.
Scale My Body Composition 2 ho an'ny 21,41 euro
Ankalazaina amin'ny volana ho avy ny krismasy. Raha tiantsika hifanaraka ny akanjo alohan'ny indrindra ary aorian'ny fety, tokony hanomboka hifehy ny lanjantsika isika. Xiaomi dia manolotra antsika amin'ity tranga ity ny Mi Body Composition, refy izay ahafahantsika mifehy ny gadra sy ny fatin'ny vatantsika amin'ny fotoana rehetra.
Vidio ny vatako Compositiion 2
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » Finday » Xiaomi » Ny varotra teknolojia tsara indrindra amin'ny 11.11 ao AliExpress